I-GNOME 3.4 iyatholakala! | Kusuka kuLinux
I-Gnome 3.4 ikhishwe futhi iza ilayishwe izindaba. Kusukela kukhishwe kwayo okukhulu kokugcina (inguqulo 3.2) kunezinguquko ezingaphezu kwezingu-41.000 ezenziwe. Abaningi ukulungiswa kwamaphutha zibe zincane kepha le nguqulo iletha ezinye izici ezibukwayo y okusebenzayo Kuyathakazelisa impela.
Nge-GNOME 3 kube noshintsho olukhulu olwamukelwe kahle kakhulu ngabasebenzisi abaningi, okunikeza ideskithophu ukubukeka kwesimanje, okubonakalayo futhi ngokuhambisana nalokho abasebenzisi abaningi abakudingayo namuhla. Manje, i-GNOME ikhipha uhlobo lwayo olusha olungu-3.4 olufaka isici sokubuka esipholile kakhudlwana.
2 Ukusekelwa kwehadiwe okuthuthukisiwe
3 Ezinye izithuthukisi zohlelo lokusebenza
Uhlelo lokusebenza Amadokhumenti Kwakhiwe kabusha.
Epiphany, isiphequluli sewebhu se-GNOME, siqanjwe kabusha saba yiWebhu. Manje usune-interface enhle yenguqulo 3.4, kufaka phakathi ibha yamathuluzi eyenziwe kabusha kanye ne- "super menu". Ukuthuthuka kokusebenza okuningana kwenziwe futhi, kufaka phakathi umlando wokuphequlula okusheshayo.
Uhlelo lokusebenza lokuxoxa ngozwela nalo luthuthukisiwe. Ifaka isikhombimsebenzisi esisha sezwi nevidiyo esihlanganiswe ngokuphelele ne-GNOME 3, okwenza kube lula ukuphendula ngokushesha izingcingo zevidiyo njengoba uzithola. Kepha futhi kubangcono ngokusekelwa okusha kwemiyalezo ye-Windows Live nengxoxo ye-Facebook.
Uhlelo lokusebenza loxhumana nabo nalo lithole izibuyekezo ezibalulekile. Okuqukethwe okuyinhloko kohlu loxhumana nabo kuthuthukisiwe, kanye nemininingwane yokuxhumana. Oxhumana nabo bafaka izici eziningi ezintsha, kufaka phakathi iziphakamiso zokuxhumeka ku-inthanethi kanye nesikhi esisha se-avatar
Elinye ithuluzi elibuyekeziwe ngamaPhasiwedi namaKhiye. I-interface yayo yomsebenzisi ihlelwe kabusha ukuze icwengisiswe futhi ibe nenhle kakhulu.
Ukusekelwa kwehadiwe okuthuthukisiwe
Ukuthuthuka okuningana okufakwe kule nguqulo kuhlobene nokuhlanganiswa kwehadiwe nokuxhaswa, okwenza i-GNOME 3 isebenze ngamadivayisi amaningi wehadiwe, inikeze umuzwa oshelelayo.
Ukulinganiswa kombala okuthuthukisiwe, okuzokhumbula manje ukuthi iphrofayili yombala ikuphi idivayisi ethile.
Ukuphathwa okuthuthukisiwe kweziteshi zokumisa amadokodo kanye nabaqaphi bangaphandle, ngakho-ke manje incwajana yokubhalela izokwazi ukuqhubeka nokusebenza (futhi ngeke imiswe okwesikhashana) lapho ixhunywe kumonitha wangaphandle, noma ngabe isivalo sivaliwe.
Ukusekelwa kokhiye bevolumu kuzipika ze-USB nakumahedfoni.
Ukusekelwa okusha kokulungiselelwa kwabasebenzisi abaningi, njengamadivayisi we-USB axhumeka kubasebenzisi abaningi.
Ezinye izithuthukisi zohlelo lokusebenza
Kunokunye ukuthuthuka okuningi ezinhlelweni zethu zokusebenza eziqukethwe kule nguqulo. Ngaphezu komsebenzi ojwayelekile wokulungisa iziphazamisi, kukhona ukuthuthuka okubonakalayo nezici ezintsha. Lezi ngezinye zazo:
Imenenja yefayela leNautilus ifaka phakathi umsebenzi wokuhlehlisa, ukuvumela ukuthi ubuyisele ushintsho olwenzayo. Ilungele ukulungisa amaphutha.
Isipikili se-Sound Juicer CD sinesici esisha sokuthola imethadatha enikeza ukusekelwa okuthuthukisiwe kwama-albhamu ama-disc amaningi.
Isihleli sombhalo se-gedit sesivele sinokusekelwa kwendabuko kwe-Mac OS X ne-GNOME.
I-Cheese webcam photo booth manje isebenzisa iWebM njengefomethi ezenzakalelayo yevidiyo (esikhundleni seTheora).
Imidlalo yenziwe yanamuhla. Imigoqo yesimo isusiwe, amamenyu wohlelo afakiwe, nokuningi.
I-System Monitor manje isekela ukulawulwa kweqembu.
I-Image Viewer (ngokuvamile ebizwa ngokuthi "Iso le-GNOME") inebha eseceleni yemethadatha. Lokhu kwenza kube lula ukudlulisa amehlo ezithombeni futhi ubuke izakhiwo zazo ngasikhathi sinye.
I-Evolution manje ingasetshenziselwa ukuxhuma kumaseva weKolab Groupware. Ama-akhawunti amaningi weKolab angasetshenziswa ngasikhathi sinye. Imodi enqanyuliwe, uhlu olunwetshiwe lwamahhala / olumatasa, nokuvumelanisa ukuthola ukungqubuzana nokulungiswa nakho kusekelwa ngokuphelele.
Isethaphu wizadi ye-Evolution izothola ngokuzenzakalela abahlinzeki be-imeyili abavame kakhulu, yenza kube lula ukusethwa kwe-akhawunti yakho ye-imeyili. Njengenani elengeziwe, futhi ikuvumela ukuthi uhlele kabusha ama-akhawunti wakho we-imeyili kubha eseceleni.
Ngokuvamile, umuzwa osalayo ukuthi bapholishe kakhulu ukusebenza okujwayelekile, ukubukeka nokuthi manje ukusebenzisa i-GNOME ngale nguqulo entsha kukhululeke kakhulu kumsebenzisi. Singayilanda ukuze siyivivinye enguqulweni ebukhoma noma siyivivinye ekusabalalisweni okuhlukile okufaka le desktop.
Ngeminye imininingwane, ngiphakamisa ukuthi ngifunde i- khipha amanothi I-GNOME 3.4 (ngeSpanishi).
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » I-GNOME 3.4 iyatholakala!
Oswaldo Villarroel kusho
Umkhosi waseLatin American Wokufakwa Kwamahhala Kwesoftware (i-FLISoL)
Isiqhingi saseMargarita, Isifunda saseNueva Esparta, eVenezuela
-Design and Development of Online Payment Gateways under Free Software (E-Commerce) (UJose Luis Oronoz Openidea)
-Izindlela nemisebenzi yokukhuthaza ukusetshenziswa kwe-Free Software ne-GNU / Linux ukusatshalaliswa phakathi kwabasebenzisi be- "non-computer". UCarlos Reges (iLanga likaMargarita)
- Imethadatha kanye nokuba sengozini kuwebhu.
- Ukusatshalaliswa kwemeta kweCanaima GNU / Linux (Sasha Solano CNTI)
- Imisebenzi yezemfundo neyokufundisa yabafundi ngeSoftware yamahhala kanye no-2.0. (UCarlos Reges Sol de Margarita
- Isoftware Emahhala Nokuphathwa Kombuso Kamasipala. (UManuel Decabo Alcaldia Antolin del Campo)
- Inethiwekhi Yabagqugquzeli Bomphakathi CANAIMA GNU / Linux (Juan Blanco CNTI)
- Ukuthuthukiswa kwewebhu ngobuchwepheshe bamahhala.
- Ukuthuthukiswa Kwemidlalo ePython namaPygames (uGenaro Cibelli Tecnolinux)
- Ukufunda iPython (Ngaphansi Kwe-Linux Console) (UJose Luis Oronoz Openidea)
- Ukuthuthukiswa kwe-Hardware ne-PinguinoVE (Oswaldo Villaroel XYN Consultores Tecnologicos
Phendula u-Oswaldo villarroel
Ama-Solidrugs Pacheco kusho
Nginethezekile ngegobolondo le-Gnome 3 .. uma okuthile okunomkhawulo futhi okulula kakhulu ukukusebenzisa ngiyakuthanda kakhulu kepha ngokusobala bayibonile inkinga, ngizolinda ushintsho, d_joke ngiyaxolisa, uzame kuphi?
Phendula kuma-Solidrugs Pacheco
Hhayi ngomoya wokunyathela ... kepha, ngaphandle kwalezo zici eziqondene ne-GNOME, yonke into ekhangiswe lapha "njengezici ezintsha" seyitholakele ku-KDE isikhashana.
Kungani i-GNOME, ngokwesibonelo, ingahlanganisi kangcono ne-Akonadi noma iNepomuk, inikezwe ukuthi zombili izinto AKUDINGI ukuthi i-KDE isebenze? Izandla eziningi ezisebenza lapho kunokuzama ukubhala kabusha i-Evolution Data Server okwesithathu kunengqondo. Ngicabanga ukuthi ukube bekungenjalo, izindaba eziningi zokuqina kweKDE bezizolungiswa, izinkinga eziningi ezingenamsebenzi ze-GNOME bezizolungiswa, futhi sonke sine-desktop enokuncintisana kakhulu.
Ukuqinisekisa kukaMirasala kusho
Umbuzo: ukuyifaka kususa iGnome engivele nginayo (ngisebenzisa Ubuntu 10.04) noma ngingaqala amaseshini ami ngokukhetha imvelo? Jabulela
Phendula u-Auringal ovela eMirasala
Sanibonani zihlobo. Umbuzo, ngabe ukhona kini othande iGnome3?, Ngoba ngokwami ​​ngikuthola kukubi, kukhawulela, ukubuyela emuva maqondana nalokho ebesivele sinakho ngeGnome2 + (imiphumela ehlukahlukene nokulungiswa).
Uma unokufinyelela okuzenzakalelayo, ngeke ukwazi ukukhetha ideskithophu, kepha uma ukwazi ukufinyelela ngesicelo sephasiwedi, ungakhetha futhi ukuthi iyiphi indawo yokufaka engafaka iseshini yakho.
sawubona, mmmm gnome 3 kubonakala kukuhle kimi, kepha kunqunyelwe, kunezinto ezingangilingani = _ = ngaphambili, esikoleni, ngangithanda i-gnome2 kakhulu, kepha manje ngisebenzisa i-xfce, (ngoba ukulanda i-kde kungenza ngibe livila) , Ngicabanga nokuthi kuncane okulungisekayo maqondana ne-gnome 2, ukube ibinokubonakala kwe-gnome 3 kanye nokwenza ngokwezifiso, amandla nezinzuzo ze-gnome 2 kungaba uthando owo.
Umbuzo owodwa, ngizothenga i-netbook bese ngifaka i-archlinux kuyo, kepha ngithanda ukwazi ukuthi iyiphi indawo engcono kulawa makhompyutha, i-kde4, xfce (engikukhethayo manje ^^) noma i-gnome, okungcono: / ??
U-Alejandro Ruiz kusho
Nginethezekile nge-gnome Shell (3), futhi ngezandiso zingcono kakhulu, ngiyethemba 3.4
Phendula u-Alejandro Ruiz
Sawubona Helena. Ngabelana ngokuphelele ngalokhu okukhulumayo maqondana neGnome3, kwenzeka into efanayo kimi ngenkathi ngiyizama.
Ngiyakutshela ukuthi ngaphambi kokuthi ngisebenzise iFedora 14 ngeGnome2 nangemuva kwezinguqulo zokugcina zeFedora kufaka iGnome3 bekufanele ngifune i-distro entsha. Ngisesha ngafika eMint12. Kuyi-distro esekwe ku-Ubuntu, isebenzisa i-Gnome2 futhi ifaka ne-Gnome3 elungiseka ngokwengeziwe. Ngizokutshela uma ungazama. hehee.
jaa udadewethu ngafaka i-linux mint lxde 12 kwi-PC yakhe yedeskithophu, futhi wathula i-xD, ngicabanga ukuthi ngizosebenzisa i-archlinux ne-linux-one + xfce kernel ^ _ ^
I-DIGITAL PC, i-Intanethi kanye Nensizakalo kusho
Izindaba ezinhle kakhulu, kuyabonakala ukuthi uGonme uyathuthuka kakhulu ngemuva kokuqala kwakhe, okuyinto iningi lethu ebelithanda ngo-3.0, futhi waqala ukuthuthuka enguqulweni engu-3.2 futhi manje ngale nguqulo entsha usengcono kakhulu.
Ngibheke ngabomvu ukuthi uFedora 17 aphume neGnome 3.4, hehehe, ngoba okwamanje ngisebenzisa uFedora 16 nge-KDE.
Phendula kwi-DIGITAL PC, i-Intanethi kanye Nensizakalo
Angazi noma ngabe ngedwa okwenzekile kuye kepha ngine-Ubuntu 11.10 futhi ukufaka iGnome 3.4 kulimaze ezinye izinto. Enye yazo kwakuyiPhaneli Yokulawula okuthi lapho uchofoza kumsebenzisi, imeyili, njll., Imenyu iboniswa njengempunga, emhlophe nezinhlamvu zimhlophe futhi ngaphandle kokuthi ubeka isikhombisi phezu kwezinhlamvu awukwazi ukufunda izinketho kahle. Okunye kukuLibreOffice lapho uma izinhlamvu zingaveli kumamenyu. Bekufanele ngilande i-Gnumeric Spreadsheet ukuze ngikwazi ukusebenza ngokunethezeka. Kuze kube manje yizinto ezimbili kuphela engikwazile ukuzithola ngoba ngizisebenzisa nsuku zonke. UNkulunkulu uyazi ukuthi yini enye eyonakele futhi angazi namanje ...
I-Xfce isondela kunguqulo 4.10 [Kubuyekeziwe]